ပင်မစာမျက်နှာ Tags: CASA
လှေကားထစ်ခြင်းလေ့ကျင့်ခန်း - အိမ်၌တင်ပါးကိုခိုင်မာစေရန်လေ့ကျင့်ခန်း ၅ ခု (သုံးပြီး ...
အိမ်တွင်တင်ပါးများကိုတင်းမာစေရန်ခြေလှမ်း (သို့မဟုတ်ကွန်ဒိုမီနီယံလှေကားများ) ရုံနှင့်လုံလောက်သည်။ ဤတွင်လုပ်ရန်လေ့ကျင့်ခန်း ၅ ခုနှင့်အကြိမ်မည်မျှလေ့ကျင့်ရန်ဖြစ်သည်။
#IoRestoACasa: ဒီနေ့ခေတ်မှာအိမ်မှာလုပ်ရန်လှုပ်ရှားမှု ၃၈ ခု ...
ဒီအချိန်ကာလအတွင်းကုန်သွားဖို့အိမ်မှာလုပ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒီနေရာတွင်တစ်နေ့တာကိုယူရန်အယူအဆ ၃၈ ခုရှိသည်။
coronavirus ကြောင့်ဟယ်ရီနှင့် Meghan သည်အီစတာတနင်္ဂနွေနေ့တွင်လူ ၂၀ အားအစားအစာများကိုအိမ်သို့ယူဆောင်လာခဲ့သည်။
အိမ်၌တဆေးထည့်ခြင်း (အမေနှင့်ဘီယာ) သည် ပို၍ ...
လက်ဆောင် De Vincentiis - 7ပြီလ 2020, XNUMX 0
ဒီနေရာမှာပေါင်မုန့်၊ ပီဇာ၊ အချိုပွဲအတွက်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းအနည်းငယ် (နှင့်စုံတွဲတစ်တွဲပင်လျှင်) ချဉ်ချဉ်မှုနှင့်ဘီယာထုတ်လုပ်သောတဆေးကိုမည်သို့လုပ်ရမည်နည်း။
အိမ်တွင်လှပသောစားပွဲတစ်ခုကိုမည်သို့ထားမည်နည်း - Csaba ၏အကြံပြုချက် ...
လက်ဆောင် De Vincentiis - 3ပြီလ 2020, XNUMX 0
အိမ်တွင်လှပသောစားပွဲတစ်ခုကိုမည်သို့ထားမည်နည်း။ သင်၏နေ့စဉ်စားပွဲကို ပို၍ လှပစေရန် Csaba dalla Zorza ၏အကြံပေးချက် ...
Ursula Corbero, တိုကျို၏အရှိဆုံး "wow" La casa မှကြည့်သည်
"La casa di carta" ၏စတုတ္ထအပိုင်းသည်ယနေ့ Netflix သို့ရောက်ရှိသည်။ ပြီးတော့သူလည်းဒဏ္legာရီဆန်လှတဲ့တိုကျိုပဲ။ ဤတွင်သူမ၏အကောင်းဆုံးအသွင်အပြင်များမှာ! ...
Dog's Life - မာရီယို၏ရုပ်ရှင်မဟုတ်ပါ
Furio နဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာတစ်လနီးပါးရှိနေပြီ။ ဗစ်တိုဘိုမှာတာ ၀ န်ယူမှုတစ်ခုကြောင့်နေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
အမေကြည့်! …ပျံ! မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များနှင့်သူတို့၏သက်ရှိကမ္ဘာ ...